आफ्नी आमा उत्कृष्ट भन्दैमा अरुको आमालाई बोक्सी भन्न पाईन्छ ? भन्दै गर्जिए रमेस प्रसाईँ ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १७:२१
आफ्नी आमा उत्कृष्ट भन्दैमा अरुको आमालाई बोक्सी भन्न पाईन्छ ? भन्दै गर्जिए रमेस प्रसाईँ !
एजेन्सी, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा अहिले धरानका रमेश प्रसाई नाम निकै नै लोकप्रिय भइरहेको छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका उनले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्द छन् । भर्खरै मात्र पब्लिक स्पिकर सिजन २ मा उनले उपाधि जितेका छन् ।
रमेश प्रसाई स्नातक तहका विद्यार्थी हुन् । उनी धरानको रेडियो गणतन्त्रका कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुन् । उनको आवाज श्रोतामाझ लोकप्रिय छ। मेश प्रसाई कविता समेत लेख्ने गर्दछन् । कविता तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना विचारहरु राख्दा आफू भित्रको कुण्ठा बाहिर आउने उनी बताउँछन् ।
बोल्नमा माहिर उनले रेडियो कार्यक्रमहरु तथा इन्टरनेट र पुस्तकहरू मार्फत देशविदेशका खबरहरु जानकारी लिने बताउँ छन् । उनी आफु बोल्न कै लागि जन्मेको बताउ छन् । समाजमा केहि घटना घट्दा उनी तत्काल आफ्नो विचार राख्ने गर्छन् ।
चितवन : रबिका लागि अदालत पुगे पुन्य गौतम
PREVIOUS Previous post: छविकी पहिलो श्रीमती हेमा ओझा रुँदै मिडियामा
NEXT Next post: गायिका एलिना चौहानको ‘तिम्रो खुशीमा’को भिडियोमा ऋचा र सुदिप
भोलि, कसैले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड वा देउवाका कारण आत्महत्या गरेको हूँ भनेर पासो लगायो भने उहाँहरु जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ? 24,146 views